China otomatiki Jumbo Mabhegi Kuchenesa Machin Mhepo Washer FIBC Inosuka ESP-B fekitori uye vagadziri | VYT
Otomatiki Jumbo Bhegi Kuchenesa Machin Mhepo Washer FIBC Inosuka ESP-B
Muchina uyu unoreva mushe yekuchenesa yemukati, zvakanyanya zvinoreva bhegi remudziyo wemukati wekuchenesa muchina. Mukuita kwekucheka nekusona mabhegi emidziyo, jira repasi rinogadzira magetsi emagetsi.
FIBC Container bhegi, inozivikanwawo seyakagadzika bhegi bhegi, saga bhegi, bhegi repakati, nezvimwewo, imhando yemudziyo mudziyo mudziyo. Iine crane kana forklift, inogona kuona kutakurwa kwecontacted. Iyo yakakodzera kutakura hombe hombe hombe hupfu uye granular zvinhu. Containerized bhegi rudzi rwechinhu chinoshanduka chekutakura kavha mudziyo, uyo unoshandiswa zvakanyanya mukutakura uye kuputira hupfu, chidimbu uye chivhariso zvinhu zvakaita sekudya, zviyo, mushonga, indasitiri yemakemikari, zvicherwa zvigadzirwa, nezvimwe. Iyo bhegi remudziyo rakagadzirwa nepolypropylene. sezvo chikuru mbishi zvinhu, achiwedzera shoma kugadzikana omesa, zvakaenzana kusanganisa, utsotso uye extruding epurasitiki firimu kubudikidza extruder, achicheka kupinda sirika, uye ipapo kutambanudza, kuita yakakwirira simba uye yakaderera elongation PP mbishi sirika nekupisa, uyezve Kugadzira jira repasi repurasitiki rakarukwa nekumonera uye kupfeka, uye kurisona nechifuramabwe nezvimwe zvekugadzira toni bhegi.
Kazhinji, calcium carbonate inowedzerwa kumachira eiyo yakakosha mutsara wehomwe bag. Nekuti jira repasi rakakora kwazvo, zvirimo zvecalcium carbonate padanho rechikamu zvakakwirira. Kana mhando yecalcium carbonate yakawedzerwa iri murombo, pachave neguruva rakawandisa, rinozokanganisa iro rekubvisa simba rekubvisa. Panguva imwecheteyo, pachave nemachira ekupedzisira, mitsara uye mamwe marara muhomwe yemidziyo. Mune mamwe mahunyanzvi minda inoda kucheneswa zvakanyatso mukati mehomwe yemudziyo, zvinodikanwa kuchenesa guruva nemitsetse mukati mehomwe yemudziyo.
Nzira yakadzivirirwa Pasi
Feni kuyerera 7000m³-9000m³
Fan kumhanya Tendeuka
Kunetseka kwekubvisa kumanikidza anenge 8000V
Main kumanikidza anenge7bar
Kushanda Kushanda dzinenge5 / 6bar
Ruzha Kubasa 60PB
maawa ekushanda Nguva yakachena inosiyana zvichienderana nehomwe vhoriyamu yekugadzirisa
net uremu anenge 300kg
vhoriyamu 2 × 1.2M
Ruvara Bhuruu, yero
Iyo yekushandisa modhi ine chigadziko, bhokisi rakakura muviri rakarongedzwa kune mumwe mugumo wechigadziko, mweya unovhuvhuta mudziyo wakarongedzwa kune mumwe mugumo wechigadziko, nzira yekumisikidza yekugadzirisa bhegi remudziyo pachigadziko, uye mudziyo wekubvisa wemagetsi kubvisa static magetsi mubhegi muviri.
Munguva yekucheka nekusona mashandiro anodiwa kugadzira maFIBC, jira rinobhadharwa nemagetsi. Izvi zvinopomerwa zvemucheka zvinogara zvichikonzeresa kunamatira kwetambo shomashoma uye jira uye kunamatira kwemasara eiyo anodziya ekucheka mativi. Zvakare zvipembenene, vhudzi remunhu uye kunyange zvinhu zvemunhu zvevashandi zvinowanzo kuwanikwa mune nyowani dzakagadzirwa dzeFIBC.
Pashure: LoopCUT webbing FIBC / hombe bhegi yekucheka muchina FIBC-4/6
Zvadaro: Hydraulic Vertical / Kadhibhodhi / Plastiki Dhinda Waste Pepa Baler
Fibc Bhegi Kuchenesa Muchina
Jumbo Bhegi Mhepo Washer
Jumbo Bhegi Yakachena Muchina
FIBC Jumbo Bhegi Yekuchenesa Muchina ESP-A